प्रियंकाले माफी मागिन्, ‘क्वान्टिको’मा यस्तो बोलेकी थिइन् (भिडियोसहित) - Namasteholland, News, Information and Technology
प्रियंकाले माफी मागिन्, ‘क्वान्टिको’मा यस्तो बोलेकी थिइन् (भिडियोसहित)
२७ जेष्ठ २०७५, आईतवार ०९:०६0329
काठमाडौं, २७ जेठ (एजेन्सी) । अमेरिकी श्रृंखला ‘क्वान्टिको’मा अभिनय गरेर ग्लोबल आइकन बन्न सफल बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा अहिले ‘क्वान्टिको’कै कारण विवादित बनेकी छिन् ।
क्वान्टिकोको तेस्रो संस्करणको पाँचौं भागमा हिन्दु आतंकवादसँग सम्बन्धित एक दृश्यलाइ बोलेको एउटा सम्वादका कारण उनी विवादमा आएकी हुन् । ‘क्वान्टिको’ अमेरिकाको चर्चित टेलिभिजन सिरीज हो । यस सिरीजको तेस्रो सस्करणको ‘द ब्लड आफ रोमियो’ मा देखाइएको दृष्यलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को विवाद भएको थियो ।
जुन दृश्यमा एक भारतीय हिन्दुलाई आतंककारी भनिएको छ । उक्त संवाद प्रियंकाले बोलेकी छिन् । अधिकांश भारतीय नागरिक प्रियंकामाथि खनिएका छन् । भने भारतीय सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर #ShameOnYouPriyankaChopra र #BoycottQuantico ह्याशट्याग राखेर प्रियंकालाई ट्रोल गरिरहेका छन् ।
उक्त विवादका कारण उनले उनले ट्वीटरमार्फत माफी मागेकी छिन् । यसअघि ‘क्वान्टिको’ सिरीजका निर्माताहरुले समेत यसै विषयलाई लिएर माफी मागेका थिए ।
उनले बोलेको सम्वाद
‘यो पाकिस्तानी होइन, यसको घाँटीमा रुद्राक्षको माला छ । यो कुनै पाकिस्तानी मुसलमानको घाँटीमा हुन सक्दैन । यो एउटा भारतीय राष्ट्रजादी हो जो पाकिस्तानलाई फसाउने प्रयास गर्दैछ ।’
यही सम्वाद भएको भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि उनी आलोचित भएकी हुन् ।
पाँचौ भागको कथा अनुसार प्रियंका एफबिआइ एजेण्टको भूमिकामा छिन् । उनको टोलीले गिरफ्तार गरेका केही शंकास्पद व्यक्तिहरु पाकिस्तानी भएको शंका हुन्छ । प्रियंकाले एउटा व्यक्तिको घाँटीमा रुद्राक्षको माला देखेपछि यो सम्वाद बोल्छिन् ।
भारतीय अभिनेता शत्रुघन सिन्हाले ट्वीट गर्दै केही पैसा र प्रसिद्धिका लागि आफ्नै देशको बेइज्जती गरेको भनेका छन् ।
१३ जेष्ठ २०७६, सोमबार १०:०१0526
३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ११:३५0504
Hey Buddy!, I found this information for you: "प्रियंकाले माफी मागिन्, ‘क्वान्टिको’मा यस्तो बोलेकी थिइन् (भिडियोसहित)". Here is the website link: https://www.namasteholland.com/%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%ab%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8d/. Thank you.